Milkaa'ina mul'atasaaniif qooda keenya haa bahannu
Oduuwwan ijoon tibbana qalbii ummata biyyattii guutummaatti dhormatanii turaniifi xiyyeeffannaa miidiyaalee addaaddaa biyyaa keenyaa turan keessaa tokko waa'ee filannaa dura taa'aa ADWUti.
ADWUIn paartii siyaasa biyyattii jijjiire, misoomaafi ijaarsa sirna dimokraasiirratti waggoota 27 darbaniif hojjetaa tureedha. Addichi sochii gama siyaasaa, dinagdeefi hawaasummaatiin taasiseen dameewwan sadanirrattuu bu'aa qabatamaafi lakkaa'amuu danda'u galmeessiseera.
Keessumaa gama hawaasummaafi dinageetiin imaammata misoomaafi guddinaa qabatee ka'een biyya daran boodatti hafummaafi hiyyummaadhaan xaxamtee qarqara du'aafi jireenyaa turtetti lubbuu horeera.
Hojii bu'aa qabeessa damee hawaasummaatiin galmeessiserraa lammiileen gama barnootaafi fayyaatiin ija banateera, kan dhukkubates dhiyeenyatti wal'aansa argachuu danda'eera.
Hidha Guddicha Haaromsa Itoophiyaafi daandiilee baaburaafaa dabalatee pirojektonni misoomaa gurguddoon hedduus dura bu'ummaa dhaaba kanaatiin bocamanii hojjetamaniiru; hojjetamaas jiru.
Qilleensa siyaasaa ADWUIn bitimseen hawaasni biyyattii, “Siyaasniifi ibiddi fagootti” jechuun siyaasarraa fagaachaafi dheessaa ture jijjiiramee hundumtuu waa'ee mirgasaafi eenyummaasaatti akka qabsaa'u, akkasumas sodaa tokko malee ifatti akka gaafatu ta'eera.
Addi dhaabbilee siyaasaa afur, Dhaabbata Dimokraasummaa Ummata Oromoo, Warraaqsa Dimokraasummaa Saba Amaaraa, Warraaqsa Dimokraasummaa Ummatoota Kibbaafi Adda Bilsummaa Tigraayi miseensummaan hammatee jiru misoomaafi ijaarsa sirna dimokraasii biyyattiitti eegalame caalaatti ittifufsiisuuf Kibxata darbe dura taa'aa haaraa filateera.
Mana Marii ADWUItiin dura taa'aa kan filataman ga'eessi umrii 42 Doktar Abiyyi Ahmad, muuxannoo hojii waggoota dheeraaf qabanitti dabalee hayyuu qophii barnootaatiinis nama sadarkaa guddaarra jiraniidha.
Dhaabbata Dimokraasummaa Ummata Oromoo (DhDUO) dura taa'ummaan tajaajilaa kan jiran Doktar Abiyyi Ahmad, miseensotni mana marii addichaa yeroo dheeraa fudhachuun qoratanii kan ilaalaniifi baasanii buusanii hayyuu gama hundaan cimina, ga'umsa, akkasumas jaalatamummaafi dhagahamummaa guddaa ummata biraa qaban ta'uu mirkaneessuun filataniiru.
Obbo Mallas Zeenaawiifi Obbo Hayilamaariyaam Dassaalanyitti aananii addicha ogganuuf nama sadaffaa ta'anii kan filataman Wixata dhufu ammoo Ministira Muummee Mootummaa RFDI ta'anii Mana Marii Bakka Bu'oota Ummataatiin muudamuuf kan jedhan Doktar Abiyyi, muuxannoo kuufatanirraa ka'uun rakkoo yeroo dheeraaf biyya kana keessa tureef furmaata akka argamsiisan kutaalee hawaasaafi hayyoota hedduun abdatamaniiru.
Oromoon baay'ina ummata biyyattii keessaa harka 40 qabu aangoo olaanaa akkanaa qabachuun adeemsa siirrii seenaa biyyattii keessatti mul'atee hinbeekne waan ta'eef, milkaa'ina mul'ataafi karoorasaaniitiif saboonni, sablammoonniifi ummatoonni biyyattii garaagarummaa tokko malee maddiisanii hiriiruu qabu.
Namni tokko qofaasaa homaa gochuu waan hindandeenyaaf hayyoonni, saboonniifi sablammoonni, akkasumas dargaggoonni bakkuma jiranitti waan sirrii hojjechuudhaan tumsuun isaanirraa eegama.
Keessumaa hayyoonni leenjii kennuudhaanis ta'e hubannoo gabbisuudhaan qoodasaanii bahachuu qabu. Biyyi namoota gurguddoo beekumsa, ga'umsaafi kaka'umsa qabuun ogganamtu daftee waan guddattuufi misoomtuuf ilaafi ilaameedhaan isaan wajjin hojjechuun daran murteessaa ta'a.
Hayyoonni damee irratti bobba'aniin qorannoofi qo'annoolee gaggeessuun, caasaalee sadarkaa sadarkaan jiran ogummaafi beekumsa isaaniitiin deggaruun, paartiileen mormitootaas garaa garummaasaanii akkuma jirutti qabatanii ijaarsaafi misooma biyyaarratti wajjummaa hiriiruu qabu.
Beektonni Oromoo akkanatti bahanii hojjechuun dhaloota duubaan dhufuufillee hamilee guddaa waan ta'uuf, akkasumas dhalataa Oromoo kaaniif fakkeenya guddaa waan ta'eef xiyyeeffannoon hojjechuun murteessaadha. Dargaggoonni Oromoos ta'e biyyattii waan oggansisaanii jedhuun gurra kennanii tasgabbi fakkeenya qabuun maddii hayyuufi ogganaa kanaa dhaabachuun irraa eegama.
Namni tokko gara oggansaatti dhufeera jennee sirbuurra, ga'ee keenya caalaatti cimsuuf Oromoofi Oromiyaa qabannee oftaanee irraa hafuun waantota gaarii biyyaafi ummatashii fayyadan hojjechuu qabna. Nuti dursinee warri kaan akka nurraa dhaalan (fudhatan) gochuu qabna.
Torban kana/This_Week 4308
Guyyaa mara/All_Days 1641903